पोखरा: लेकसाइड आधारातसम्म गुल्जार, अरु क्षेत्रमा ९ बजे नै डन्डा – Merosamaya
By mero samaya	 Last updated Apr 30, 2019
लेखक गनेस पौडेल भन्छन्, ‘पोखरा भनेको संस्कृति हो, कुनै एक ठाउँ वा स्थान होइन ।’ कवि तीर्थ श्रेष्ठ कालीगण्डकीदेखि मस्र्याङ्दी बुढीगण्डकीसम्म समेटिएको संस्कृतिलाई पोखरा मान्छन् ।
भारत वा बाहिरको कुनै देशमा पुगेका लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा वा पर्वत र म्याग्दीसम्मकालाई घर सोध्ने हो भने उनीहरुको छोटो उत्तर आउँछ, पोखरा । पोखरा चिनेकाहरुले पोखरा कहाँ भनेर सोधे भने बल्ल जिल्लाको नाम र ठाउँ भन्छन् । एकातर्फ फराकिलो र बृहद पोखराको बहस चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ पुरानो साँधसीमाना र सहरभित्रै पोखराको परिचय र अवस्था तथा त्यहाँको समस्या फरक छ ।
पोखरा बजारभित्रको कथा–व्यथा भिन्न छन् । पर्यटकीय पोखराभित्रै सरकारको नजर फरक हुँदा यहाँका व्यवसायीको चित्त दुखाइ छ । पोखरा भन्नेबित्तिकै पर्यटनसँग जोडिएर आउँछ । तर, त्यही पर्यटन क्षेत्रको महसुस र फाइदा सबैले लिन भने नपाउँदा यहाँ दुई खाले धारणा बनेका छन् । एउटा हो, लेकसाइड र अर्को त्योदेखि बाहेकको बजार क्षेत्र ।
लेकसाइड आधा रातसम्म गुल्जार हुँदा त्योदेखि बाहेक बजार क्षेत्र १० नबज्दै प्राय सुतिसक्छ । लेकसाइडबाहेक बजार क्षेत्रमा पर्यटक रोकिँदैनन्, सिधै गुल्जार लेकसाइड क्षेत्र हानिन्छन् ।
यस्तो हुनुका पछाडि सरकारककै फरक व्यवहार भएको बताउँछन्, नगर रेस्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन सिटी रेबानका निवर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा । ‘एउटै सहरभित्र दुईखाले व्यवस्था छ । लेकसाइडबाहेक अरु क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र नै होइन भन्ने गरी प्रशासनले व्यवहार गर्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘पोखराको पर्यटन र त्यसबाट लाभान्वित व्यवसाय सरकारकै कारण सानो दायरामा खुम्चियो ।’
काठमाडौंबाट सडक मार्ग भएर पोखरा घुम्न आउनेहरु पृथ्वीचोक हुँदै छिर्छन् । पोखरामा हुने प्राय ठूला कार्यक्रम पृथ्वीचोक, सिर्जनाचोक, सभागृह बुद्धचोक लगायत ठाउँमै हुन्छन् । तर, पाहुनाको रोजाइ बजार क्षेत्रका होटल हुँदैनन् । पोखरामा हुने ठूला कार्यक्रमले लेकसाइड क्षेत्रका होटल भरिभराउ हुँदा अन्य बजार क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्ट खाली बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसको कारण लेकसाइड क्षेत्रमा आधा रातसम्म व्यवसाय खुला रहन पाउँछन् तर अरु बजार क्षेत्रमा १० बजेको वरिपरी नै डन्डा लाग्छ ।
त्यतिसम्म ठिकै छ तर सरकारले पर्यटन व्यवसायीका नाममा अर्को विभेद गरेको शर्माले आरोप लगाए । ‘पोखराको पर्यटन क्षेत्रको विषयमा छलफल, गोष्ठी हुँदा लेकसाइडबाहेक अन्य बजार क्षेत्रका व्यवसायीलाई बोलाइँदैन वा आवश्यक नै ठानिँदैन । सरकारले पर्यटन व्यवसायीसँग राय, सुझाव लिएको भन्छ, हाम्रा कुरा कहिल्यै समेटिँदैनन्,’ शर्माले प्रश्न गरे, ‘के हो यो पर्यटन व्यवसायी मापदण्ड ? के हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका छैनौं ? के हामी पर्यटन व्यवसायी होइनौं ?’
यसअघि पटकपटक पोखरालाई २४ सै घन्टा खुला गर्ने बहस र प्रयास भए । तर, पोखरा भनेको लेकसाइडमात्र २४ सैं घन्टा खोल्ने भनेर अभ्यास गरियो । लेकसाइड क्षेत्रजस्तै अन्य बजार क्षेत्रलाई पनि सबै याम खुला गर्ने विषयमा बहस नहुँदा रेबानका संस्थापक अध्यक्ष चिरञ्जीवी श्रेष्ठको दुख मनाउ छ ।
पर्यटन व्यवसायीको मापदण्ड केहो भन्ने नै आफूहरुले नबुझेको बजार क्षेत्रका व्यवसायी बताउँछन् । लेकसाइडदेखि बाहेक क्षेत्रका पसलमा ९ बजेको आसपासमै प्रहरी लठ्ठी घुमाउँदै बन्द गराउन आइपुग्ने गुनासो आउने सिटी रेबान अध्यक्ष दीपकराज तिमिल्सिना सुनाउँछन् । पोखरामा सुरुदेखि नै व्यापार व्यवसायमा यो २ खाले नियम बसालियो ।
एकातिर रातभर उज्यालो अर्कोतिर सम्साँझै अँध्यारो । त्यसैको उपज पोखरा उस्तै प्रकृतिको दुई संस्था छन् । एउटा सिटी रेबान, अर्को रेबान । लेकसाइडबाहेकको बजार क्षेत्रका किराना र क्याफे ९ बजे आसपासमै बन्द गर्नुपर्छ ।
होटल ११ बजे र दोहोरी रेस्टुरेन्ट, गजलमा ११ बजे संगीत र पौने १२ बजे बार बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसो नभए प्रहरीबाटै सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो व्यवसायीको छ । ११ बजेपछिमात्रै पनि पृथ्वीचोक आसपासमा आउने पर्यटकलाई भोग लागे खाने ठाउँ पाउन गाह्रो पर्छ । न सजिलै कोठ पाउँछन् न खाने पिउने रेस्टुरेन्ट । बजार क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्ट र बार बेलैमा बन्द हुने भएपछि पोखरा आउनेहरु सिधै लेकसाइड हानिन्छन् ।